Ciidamada Dowladda Federaalka oo isugu jira Boolis, Nabad Suggid iyo Militari ayaa kala dhex galay laba Maleeshiyo beeleed oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka Kaxandhaale ee Gobolka Galgaduud.
Ciidamadan oo saaka ka ambabaxay Deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa gaaray deeganadii ugu dambeeyay ee ay labada maleeshiyo beeleed ku dagaalamayeen, iyadoo lagu guuleystay in la kala dhex galo Maleeshiyaadkaasi.
Saraakiisha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay Ciidamadan kala dhex galay labada beelood inuu amray Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo.
Xaaladda deeganadii lagu dagaalamay ayaa waxa ayaa maanta kuwo weli degan, islamarkaana waxaa weli dhexfadhiya Ciidamada Xoogga dalka, Booliska Galmudug iyo kuwa Nabad Suggida.
Maamulgoboleedka Galmudug ayaa dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ugu baaqday inay dajiyaan xaaladda, islamarkaana ay maqlaan baaqa odayaasha Dhaqanka ee la xiriirta daminta colaada oo ay ku geeriyoodeen dad badani.
December 31, 2018 Geesey